Tonga ao Azia atsimo-atsinanana noho ny doro ala mamaivay ao Indonezia indray ny zavon-tsetroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2015 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Aymara, English
Miteraka zavo-tsetroka ao amin'ny lanitr'i Indonezia no doro ala mitranga ao amin'ny firenena ary mahazo an'i Malayzia sy Singapore ihany koa izany setroka izany. Olana mpitranga isan-taona ao amin'ny faritra Aziatika atsimo atsinanana izany toe-javatra izany, iampangana ny haintany sy ny tavy ataon'ny orinasam-panaovana menaka voanio ao amin'ny faritra andrefan'i Indonezia.
Araka ny Foibe Fikarohana Iraisampirenena momba ny Ala, dia noho ny asan'olombelona amin'ny ankapobeny no mahatonga ny fahamaizan'ny ala. Ny tavy [tevy ala] no fantatra fa fomba mora atao sy mora vidy indrindra ataon'ny orinasam-panaovana menaka voanio hanadiovana ny toerana. Saingy araka ny lalàna indoneziana miompana amin'ny ala No. 41/1999 toko 50 andininy 3d, mety higadra hatrany amin'ny 15 taona ny olona iray mahatonga fahamaizana ala. Io no mipetraka ao amin'ny lalàna tian'ny filoha ampiharina ara-bakinteny.
Nofoanana ny zotra ara-barotra tgany Pekanbaru, renivohitry ny faritanin'i Riau, izay ahitana ny ‘ground zero’ amin'ny fahamaizan'ny ala. Mandritra izany fotoana izany dia mbola miitatra ihany ny toerana iaingan'ny afo ao Kalimantan (zaratany Indoneziana ao amin'ny nosy Borneo).
Ao amin'ny pejy Facebook-ny ny Greenpeace Indonesia no nanambara ny fahafatesan'ny zazavavy 12 taona noho ny fahasarotam-pisefoana vokatry ny setroka. Efa nokarakaraina tao amin'ny hopitaly nandritra ny herinandro ilay zazavavy no lasa. Miantso ho amin'ny fitadiavam-bahaolana hentitra sy lovain-jafy amin'ity olan'ny zavo-tsetroka Indoneziana ity ny Greenpeace.
[…] Tonga ao Azia atsimo-atsinanana noho ny doro ala mamaivay ao Indonezia indray ny zavon-tsetroka […]
25 Oktobra 2015, 22:52